GitHub ichagadzira iyo TAR mufananidzo wega wega unoshanda wevanhu repository uye woichengeta muArctic Vault | Linux Vakapindwa muropa
GitHub inoda kuve nechokwadi chekuti rumwe ruzivo rwepasirese iyo inochengetwa mumadhiraivha akaomarara, SSD (ane hupenyu hwedzidziso hwemakore makumi matatu anotora kupisa kwakasimba uye hunyoro) inochengetedzwa zvakanaka. Uye ndeyekuti inoda kubatsira mukugadziriswa kwedambudziko iri uye mamwe akadai sekuitika kwenjodzi dzinogona kukonzera kurasikirwa kwezviri mukati.
Ndokusaka ndakaparura chirongwa ichio "Artic Code Vault" mune iyo pfungwa kuseri kweiyi iri chengetedza zvirimo muzvitoro pane wepakati pekuchengetera ane hupenyu hwakareba. Piql, kambani yeNorway inonyanya kuchengetedza data kwenguva refu, inoona nezvekupa nekukodha iyo data pafirimu. Iyo firimu tekinoroji yakavakirwa pane sirivheri halides uye polyester.
Sezvo maseva uye madhiraivha madhiraivha haana kusimba zvakakwana Nechinangwa ichi, saka data rakanyorwa pane zvinoita kunge ekare echikoro mabhaisikopo, imwe neimwe inorema mapaundi mashoma uye inochengetwa mumudziyo wepurasitiki chena saizi yebhokisi repitsa. Chaizvoizvo microfilm.
Zvinoenderana nezviyero zveIO, ichi chinyorwa chine hupenyu hunobatsira hwemakore mazana mashanu. Bvunzo dzakafananidzwa dzekukwegura dzinoratidza kuti Piql firimu inogara kwenguva yakareba zvakapetwa kaviri.
Nezve izvi, GitHub inoronga kugamuchira matepi mumugodhi wemarasha. yakabviswa iyo iri munzvimbo yeSvalbard archipelago, iyo dura iri padyo neNorth Pole pane iyo Arctic Circle.
Guta pacharo musha wekukamuri kutonhora kwepasirese. Iri rimwe remaguta ekuchamhembe kwazvo pasi rino. Archivists vanotenda kuti iyo inotonhora uye ingangoita mamiriro ezvinhu anozobatsira mukuchengetedza zvirimo.
Pa Kukadzi 2, 2020, GitHub ichagadzira iyo TAR mufananidzo wega wega wevanhu repositi inoshanda uye ichaichengeta muArctic Code Vault. Faira racho rinosanganisira zvinhu kubva kubazi rekushomeka pane yega repositi, kusanganisa chero mabhainari mafaira akakura kupfuura zana makirobheti. Kune yakakwira dhata kuwanda uye kuvimbika, ruzhinji rwe data ruchachengetwa se QR kodhi. Dhairekitori inoverengwa nevanhu uye gwara rinodonongodza nzvimbo yeyese repositi uye tsanangura maitiro ekudzosera iyo data
Chikuva chinobva charonga kuwedzera nguva yekuchengetedza zvirimo ne 10. GitHub yapinda mukudyidzana neMicrosoft Research munzira iyi kusvika pamakore zviuru gumi. Kuti zvibudirire izvi, zvikwata zvekutsvaga zvinofunga 'nyora zvirimo pane quartz girazi tereyi uchishandisa femtosecond lasers. »
Iyo Artic Code Vault chikamu chechirongwa chekuchengetedza chakatangwa neGitHub ine huwandu hwe vadyidzani vanosanganisira Internet Archive, Microsoft Research, uye Long Now Foundation. Iri zano rinosvira kusvika «zvinyorwa zvepa archive mumasangano mazhinji sekurudziro yeLOCKS - makopi mazhinji anochengetedza zvinhu zvakachengeteka".
Backup nzira yakarongeka mumabatch iyo ichagadziridzwa munguva chaiyo. Semuenzaniso, padanho reGitHub, data richazotamisirwa kunzvimbo dzinoverengeka dzedata kutenderera pasirese. Ndichiri kune rimwe divi Dzimwe mhando dzejenya dzinozogadziriswa dzinozovandudzwa pamwedzi kana pagore. Chekupedzisira, chii chinozochengeterwa mune ichi chikumbiro, matinowana iyo Artic Code Vault, ichavandudzwa makore mashanu ese zvirinani.
«Basa redu guru kuchengetedza software yemahara yezvizvarwa zvinotevera. Isu tinotarisira zvakare iyo GitHub Archive Chirongwa kuve humbowo hwekukosha kwenzvimbo yakavhurika sosi yenharaunda. Isu tinovimba kuti, nhasi uye mune ramangwana, ichasimudzira ruzivo rwepasi rose Open Source kufamba, sezvo ichizopa mukubvumidzwa kukuru kweOpen Source uye Open Data marongero kutenderera pasirese uye kukurudzira kufunga kwenguva refu, "anonyora GitHub.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyo Artic Code Vault chirongwa iwe chaunogona kubvunza chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GitHub ichagadzira iyo TAR mufananidzo wega wega unoshanda wevanhu repository uye woichengeta muArctic Vault
Iko kunhuwirira kwakashata uku kune… .unogona kundidana paranoid, asi chinhu chekutanga chandakafunga ndecheichi:
Dai ndaida kuchinja chimwe chinhu mumhino dzevanhu vese, ndaizozviita sei?
Ini ndingaite backup yekukopa kune imwe svikiro, ndobva ndanyepera kukundikana uye ndodzima kana kukanganisa iyo yekutanga, ndobva ndadzorera kubva kubhegi izvo zvandiri kuda uye nemabatiro andinoda ... ndichiudza munhu wese kuti iyi ndiyo kopi yekutanga.
Pamwe kufunga kwangu kune hunyanzvi, asi kwekanguva ... funga nezvazvo.
SourceTrail, iyo sosi kodhi inotsvaga muC, C ++, Java uye Python inova yakavhurika sosi